जहाँ पाइन्छ सहज रुपमा खाना पकाउने ग्यास -
तपाईँको नाम ?
सुमन थापा ।
कुन कम्पनीको ग्यास हो ?
राजधानी । एकै छिन बस्नुस् है ।
अर्का कर्मचारीले थापालाई हातमा स्यानिटाइजर थाप्न भने । स्यानिटाइजर दल्दै ग्यास लिन आउनुभएका थापा केही मिटरको दूरीमा परै बसे । खुद्रा पैसा मिलाएर दिनुस् है । मास्क लगाएर नाम लेखिरहेका कर्मचारीले भने । थापाले रु ६८७ ती कर्मचारीलाई दिनुभयो । भित्रबाट ग्यास आयो, ताहाचलबाट आउनुभएका थापाले ७.१ किलो अर्थात् आधा भरिएको ग्यास लिएर आफ्नो गन्तव्यमा लाग्नुभयो ।
थापा जस्तै एक दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ता लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले पालैपालो ग्यासको सिलिन्डर भित्र दिए । पालैपालो स्यानिटाइजर लगाएर प्रतीक्षामा बसे । क्रमैसँग भित्रबाट ग्यास आयो । साविकको नेशनल टे«डिङ लिमिटेडको टेकुस्थित कार्यालयमा नेपाल आयल निगमको समन्वयमा विभिन्न १८ कम्पनीको ग्यास बिक्री गरिएको छ । आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले त्यहाँ पुगेर सहजै रुपमा ग्यास लिन पाएका छन् । कुनै अवरोध छैन, कुनै अभाव छैन ।
लकडाउनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल आयल निगमले अधिकांश ग्यास कम्पनीका ग्यास एकै स्थानमा भेला गरेर उपभोक्तालाई सहज रुपमा बिक्री गरिरहेको छ । हरेक दिन बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म जुुनसुकै कम्पनीका ग्याससमेत बिक्री गरिएको छ । ग्यास उद्योगी, विक्रेता तथा डिलरका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित छन् । त्यो दृश्य हेरिरहेका पत्रकार र उपभोक्ताका माझ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट अनुगमनका लागि पुग्नुभयो ।
लकडाउनको समयमा मन्त्री नै अनुगमनमा पुगेपछि ग्यास बिक्री गरिरहेका कर्मचारीसमेत एकछिन छक्क परे । उनीहरु सामाजिक दूरी कायम गरेरै काम गरिरहेका थिए । सरकारको निर्देशनअनुसार नै उपभोक्तालाई सहज रुपमा सेवा दिन पाउँदा उनीहरुको मुहारमा पनि खुशीका रेखा देख्न सकिन्थ्यो । विपद्को समयमा कोही पनि नेपाली नागरिक भोको नपरुन् र खाना पकाउने ग्यास नपाएर अभाव झेल्नु नपरोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
बिहान ७ बजेदेखि नै ग्यास बिक्रीको व्यवस्थापन
सरकारले निगममार्फत बिक्री गरिने ग्यासका लागि बिहान ७ बजेदेखि नै कर्मचारी साविकको नेशनल टे«डिङको कार्यालयमा पुग्छन् । नेपाल आयल निगमका सहायक प्रबन्धक विकास बखतीका अनुसार निगमका कर्मचारीले दैनिक १२ घण्टा खटेर सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारको योजनाअनुसार नै काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारीलाई खाना, खाजाको समेत सोही स्थानमा प्रबन्ध गरिएको छ । निगमको संयोजनमा विभिन्न १८ कम्पनीको ग्यास बिक्री गरिएको छ । यस्तै घुम्ती पसल चलाएर पनि सेवा दिइएको छ । निगमले त्यसका लागि आफ्नै र अन्य ग्यास कम्पनीको सवारी साधन प्रयोग गरेको छ ।
अशक्तलाई पहिलो प्राथमिकता, ११४६ मा निःशुल्क फोन
निगमले विशेष गरी सुत्केरी क्वारेन्टाइनमा बसेका, अति अशक्त, फरक क्षमता भएका, हस्पिटलमा उपचार गरिरहेका, वृद्धवृद्धा, जान सक्ने अवस्था नभएका नागरिकलाई घरमै ग्यास पु¥यादिएको छ । दैनिक १ हजार ५०० सिलिन्डरको माग भए पनि अशक्तका हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको घर वा बस्तीसम्म नै ग्यास लगेर सेवा दिइएको बखतीको भनाइ छ ।
अन्यका हकमा नजिकको बिक्री केन्द्र वा बिक्रेता कहाँ सम्पर्क गर्न भनिएको छ र सोहीअनुसार पुग्दो मात्रामा ग्यास उपलब्ध भएको छ । केहीले भने आफूहरुलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्ने भएकाले घरमै ल्याइदिनसमेत भनेको उहाँको भनाइ छ । निगमले यही चैत १८ गतेदेखि त्यस्तो सेवा दिएकामा पहिलो दिन १५०, दोस्रो दिन १९ गते १७३, २० गते २६३ ग्यास अशक्तलाई उपलब्ध गराएको छ । यस्तै २१ गते मात्रै विभिन्न पाँच वटा टोलीले २७२ वटा सिलिन्डर उपलब्ध गराएको छ ।
ग्यास आवश्यक पर्ने अशक्त वा क्वारेन्टाइनमा बसेकाले पैसा नलाग्ने ११४६ नम्बरको हटलाइनमा फोन गरेर माग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै अन्य तीन वटा हटलाइनका रुपमा मोबाइल नम्बरसमेत सञ्चालनमा छन् । निगमको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र राईका अनुसार विपद्को समयमा सामान्य नागरिकभन्दा बढी समस्यामा पर्ने, वर्ग तथा समुदायलाई विशेष ध्यान दिएर सेवामूलक तवरले काम गरिएको छ ।
केही उपभोक्ताले भने लकडाउनको कारण देखाउँदै घरसम्म ल्याइदिनसमेत भनेको उहाँको भनाइ छ । निगमको प्रतिनिधिले कतिपय ठाउँमा कार्डको फोटो तथा भिडियोसमेत खिचेर ल्याएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक एक लाख ३० हजार सिलिन्डर
निगमले बजारमा दैनिक जसो नै एक लाख ३० हजार सिलिन्डर ग्यास पठाएको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार शुक्रबार मात्रै भारतबाट २५ वटा बुलेट काठमाडौँ आएका छन् । निगमका अनुसार देशभर कुल एक करोड २० लाख सिलिन्डर छन् । काठमाडौँ उपत्यकालाई सामान्य अवस्थामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर जरुरी पर्ने छ । “ग्यास कम भएर आधा सिलिन्डर ग्यास दिइएको नभई, उपभोक्ताको घरमा रहेको सिलिन्डर बाहिर निकाल्न यस्तो विधि अपनाइएको हो”, पौडेलले भन्नुभयो ।
आयात उल्लेख्य बढे पनि सिलिन्डर खाली नहुँदा बोटलिङमा समस्या पर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । ग्यास बिक्रीका सरकारको सञ्जाल नभएको अवस्थामा पनि विशेष तवरले बिक्री गर्दा आउने अनुभवलाई संस्थागत गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । निगम आफैँले सिलिन्डर ल्याउनुपर्दा के कसरी बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान लिनका लागिसमेत सबै कम्पनीको ग्यास एकै स्थानमा राखेर बिक्री गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
ग्यासमा कुनै समस्या छैन : मन्त्री भट्ट
अनुगमनमा पुग्नुभएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारको व्यवस्थापन तथा उद्योगी व्यवसायीको इमान्दार प्रयत्नका कारण ग्यास बिक्री वितरण सहज बनेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सबै टिम, निगमका कर्मचारी एवं उद्योगी तथा व्यवसायीको साझा प्रयत्नका कारण आफूहरु विषम अवस्थामा समेत सहज आपूर्ति गराउन सकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले ग्यास अत्यधिक मात्रामा आयात भएकाले हाल राख्ने ठाउँसमेत अभाव हुने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको डर बढेपछि उपभोक्ताले सञ्चिति गरेका कारण सिलिन्डर घरमै बस्ने अवस्था आएकाले तत्कालका लागि आधा ग्यास दिएर भए पनि सिलिन्डर बाहिर निकाल्न लागेको उहाँको भनाइ छ । ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्रभावकारी निर्देशन र नेतृत्वका कारण हरेक डिपोमा ग्यास सहज रुपमा उपलब्ध भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले हरेक दिनजसो देशैभरको विवरण लिएको छु । कुनै पनि स्थानमा ग्यास पाइएन भन्ने अवस्था छैन । हामीले सहज रुपमा ग्यास दिएका छौँ ।”
भारतबाट पनि नियमित रुपमा ग्यास आयात भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रहरी प्रशासनबाट पनि आफूहरुलाई सहज सहयोग भएको उल्लेख गर्नुभयो । “चार पाँच दिनअघिको जस्तो चाप र भीड छैन । डिलरमा ग्यास छ, अब आधा सिलिन्डर दिने प्रणाली हटाउनुपर्छ । धन्यवादको पात्र नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । हामीले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर डिलर खोलेर ग्यास बिक्री गरेका छौँ ।”
Previous सं’कटमा स’मस्या परे सम्झनुहोस् यिनलाई, दिदैछन यस्तो सुबिधा
Next जो खिम मोल्न तयार छौ, तर हाम्रो बारेमा पनि बोलिदिनुस् – एम्बुलेन्स चालक
यस्तो छ झलनाथ खानालको स्वास्थ्य अवस्था,भारत पुगे लगतै बालुवाटारमा घिनला,ग्दो हर्कत